12:58 PM Essays, Literature No comments
प्रजातन्त्रमा भोट हिँड्यो, जनता छुटे । समाजवादमा सिद्धान्त हिँड्यो, मान्छे छुटे,' एक असल राजनीतिकर्मीले अनौपचारिक गफगाफमा यो पंक्तिकारसित भनेका थिए । यो कथनमाथि प्रशस्त बहस हुनसक्छ । तथापि हिँड्नु र छुट्नुको विरोधाभास जीवन्त यथार्थ भने हो । यो छुटने मामलो शतप्रतिशत सही प्रतीत हुने ठाउँ र घटनाहरू धेरै छन् । तिनीहरूमध्ये त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सधैँ चर्चामा रहने र आफ्नो बेग्लै इतिहास बनाइसकेकोे अंग्रेजी विभागमा हिँड्ने र छुट्ने कथा आफ्नै खालको छ । उसो भए त्यहाँ के हिँड्यो र के
छुट्यो त ? यो प्रश्नले परीक्षणको माग गर्छ र यो आलेखमा अंग्रेजी विभागमा महत्त्वका साथ पढाइने थ्योरी अर्थात् सिद्धान्तको व्यावहारिक पाटोको परीक्षण गर्ने प्रयत्न गरिनेछ ।
कीर्तिपूरका धेरै गल्ली र चोकहरूमा, काठमाँडौँका धेरै सरकारी र प्राइभेट कलेज छेउका चिया पसल र स्टेसनरीहरूमा अनेकन् डेरिडा र फुकोका क्लोनजस्ता लाग्ने मान्छेहरू प्रशस्त भेटिन्छन् । कसैले उनीहरूका अघिल्तिर 'केन्द्र' भन्ने शब्द उच्चारण गर्‍यो भने, उनीहरू फ्याट्टै भन्छन्, 'उत्तर-संरचनावादी युगमा डेरिडाको उदयसँगै केन्द्र भत्केको कुरा दुनियाँले थाहा पायो,' या यस्तै केही । कसैले गल्तीले उनीहरूका मुखेन्जी
शंकर लामिछानेले उबेला चर्चामा रहेका सम्भवतः सबै साहित्यिक सिद्धान्त र अरू वादहरू पढेका थिए होलान् । उनका निबन्धहरूमा त्यसको छनक पाइन्छ । अझ बढी त उनी अस्तित्ववादी चिन्तन र शून्यवादी दर्शनबाट प्रभावित थिए भन्ने कुरा गरिन्छ । तर, उनका निबन्धहरू 'सम्पादकलाई चिठी' पढ्दा होस् वा 'देउताको काम' माथि घोत्लिँदा होस्, कुनै सिद्धान्तकार वा बोझिल सैद्धान्तिक जार्गनहरू भेटिन्नन् । हो, दुई चारपटक नपढी उनका निबन्धहरू सहजै बुझिँदैनन् । तर, उनको लेखाइ स्वांगे हुँदैन । भूपी शेरचनको भाषा सापटी लिएर भन्ने हो भने, लामिछानेका निबन्धहरू 'नयाँ सडकको पेटीमा आफ्नो अस्तित्व बलजफ्त जताउन उभिएको कुनै टिनएजर्सले गरेको प्रयत्न' मात्रै पनि होइन । 'मैले थुप्रो पढेको छु' को भाव नाकका पोरामा सजाएर लेख्न बस्ने हाम्रा अंग्रेजी साहित्य र सिद्धान्तका विद्वान्हरूले यत्ति पनि बुझेका नहोलान् र ?
पत्रकार कृष्णज्वाला देवकोटाको एक लेखको शीर्षकको सम्झना हुन्छ, 'के वामपन्थीले बुझिने बोले माक्र्स रिसाउँछन् ?' हाम्रा आंगल भाषाका नेपाली विद्वान्हरूले बुझिने लेख्दा को रिसाउँछन् थाहा भएन । तर कुनै न कुनै गोप्य देवता उनीहरूले पक्कै स्थापित गरेका छन् जो बुझिने लेखे रिसाउलान् भन्ने पीर हुँदो हो । अझ गजबको कुरो त के हो भने पश्चिमबाट भित्र्याइएका थ्योरीहरू पश्चिममै काम नलाग्ने भइसकेपछि हाम्रो अंग्रेजी विभागमा आइपुग्छन् । अनि तिनै थ्योरीहरू घोकेर, बुझ्दै नबुझे पनि दोहोर्‍याएर यहाँ विद्वता प्रदर्शन गरिन्छ । थ्योरी दर्शनको छिद्रजस्तो मात्र हुन्छ । कुनै खास नामको थ्योरी सीमित सामग्रीको अध्ययनबाट निकालिएको सीमित निष्कर्षसम्म मात्र फिँजारिएको हुन्छ । तर दर्शनको त्यही छिद्र पश्चिमा विश्वविद्यालयहरूमा टालिइसकेपछि हाम्रोमा त्यही छिद्रबाट दुनियाँ हेर्ने असफल प्रयत्न गरिन्छ । ताज्जुबको कुरो त के भने यस्ता छिद्रहरू मृदुभाषी हुँदैनन्, बरु नबुझिने रहस्यका पोकाजस्ता हुन्छन् । तिनै छिद्रलाई केही जार्गनहरूको गायत्री मन्त्रजस्तो जपेर कुन बौद्धिकता स्थापित हुने होला ?
प्रकाशित मिति: २०६८ असार १८ ०८:४९ (कान्तिपुर दैनिक)